धनगढी सुपर लिग : लिटल फ्लावर र कैलाली क्लब विजयी | Ratopati
personरासस exploreकैलाली access_timeजेठ ११, २०७९ chat_bubble_outline0
धनगढीमा जारी टी–२० क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता ‘धनगढी सुपर लिग’ मा लिटल फ्लावर क्रिकेट क्लब र कैलाली जिल्ला क्रिकेट क्लब विजयी भएका छन् । आज भएको पहिलो खेलमा लिटल फ्लावरले दाङको देउखुरी वारियर्सविरुद्ध १० विकेटको सानदार जीत निकालेको छ । लिटल फ्लावरका दीपक बोहरा उत्कृष्ट लयमा देखिए । उनको अलराउन्ड प्रदर्शनपछि लिटल फ्लावर १० विकेटले विजयी भएको हो ।
प्रतियोगितामा देउखुरी वारियर्सले टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर लिटल फ्लावरका बोहराले पावर प्लेमै पाँच महत्वपूर्ण ब्याट्सम्यानलाई आउट गराएपछि देउखुरी १५.२ ओभरमा ६० रनमै अल आउट हुनपुग्यो । ६१ रनको सामान्य विजयी लक्ष्य पछ्याएर जवाफी ब्याटिङ थालेको लिटल फ्लावरले ६.२ ओभरमा विना कुनै विकेटको नोक्सानीमा लक्ष्य भेट्टायो । उसका लागि उत्कृष्ट बलिङ गरेका बोहराले ब्याटिङतर्फ २३ बलमा सात चौकाको मद्दतले ३६ रनको अविजित पारि खेले । उसका मनिष थापाले अविजित १९ रन बनाए ।
त्यसअघि देउखुरीका लागि दिनेश अधिकारी र दिवान पुनले १७/१७ रन बनाउनुबाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । देउखुरीलाई सस्तैमा समेट्न लिटल फ्लावरका बोहराले चार ओभर बलिङ गर्दै एक मेडनसहित आठ रन खर्चिएर महत्वपूर्ण पाँच विकेट लिए । इनिङको पहिलो ओभर एक रनमा विकेटविहीन रहँदा दोस्रो ओभरमा आएका बोहराले प्रज्वल थापालाई एक र देउखुरीका कप्तान विशाल विक्रम केसीलाई चार रनमा बोल्ड आउट गरे ।
त्यसपछि चौथो ओभरमा बोहराले वसन्त सिंह कार्कीलाई शून्य रनमा बोल्ड गरिदिए । उनैले व्यक्तिगत अन्तिम र खेलको छैटौँ ओभरमा विराट भण्डारीलाई एक रनमा बोल्ड आउट र नारायण जोशीलाई शून्य रनमै क्याच आउट गराउँदै टोलीलाई उत्कृष्ट सुरुवात दिलाए । उसका कौशल रुपाखेतीले तीन र प्रकाश जैसी तथा सन्दीप खत्रीले एकरएक विकेट लिए । खेलको ‘प्लेयर अफ दी म्याच’ अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका बोहरा चुनिए ।
त्यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा महेन्द्रनगर क्रिकेट एकेडेमीमाथि कैलाली जिल्ला क्रिकेट क्लबले छ विकेटको जीत निकाल्यो । टस जितेर ब्याटिङ थालेको महेन्द्रनगर क्रिकेट क्लबले निर्धारित २० ओभरमा नौ विकेट गुमाएर १२० रन बनाएको थियो । १२१ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको कैलाली जिल्ला क्रिकेट क्लबले १७ ओभरमा चार विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टायो । उसका लागि राजन सिंहले अविजित ४० रन बनाउँदा दिनेश ओडले ३० रन बनाए । अर्जुन साउदले २४ रन बनाए ।
त्यसअघि महेन्द्रनगरका लागि आयुष्मान बमले ३४ र राहुल भण्डारीले २१ रन बनाएका थिए । बलिङतर्फ कैलाली जिल्ला क्रिकेट क्लबका अर्जुन साउद, नरेन साउद र शेर मल्लले समान दुई/दुई विकेट लिए । खेलको ‘प्लेयर अफ दी म्याच’ अर्जुन साउँद चुनिए । प्रतियोगितामा देशका विभिन्न छवटा क्लबहरू बुङगल क्रिकेट क्लब बझाङ, देउखुरी वारियर्स दाङ, धनगढी क्रिकेट एकेडेमी धनगढी कैलाली, महेन्द्रनगर क्रिकेट एकेडेमी महेन्द्रनगर कञ्चनपुर, लिटल फ्लावर क्रिकेट क्लब धनगढी कैलाली र कैलाली जिल्ला क्रिकेट क्लब धनगढी कैलालीको सहभागी रहेको बताइएको छ ।
एथ्लेटिक्ससँग प्रेममा परेकी सन्तोषी
नेपालका लागि ४० वर्षपछि गोलको खडेरी तोड्ने दर्शन गुरुङ अष्ट्रेलिया प्रस्थान
अफ्रिकन कप अफ नेसन्स सर्‍यो
ओन्टारियोविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै नेपाल
रोनाल्डिन्होसँग खेल्नु राम्रो अनुभव : रोहित
माओवादी बैठकमा १५ बुँदे प्रस्ताव : संसदमा थकित अनुहार निषेध, भागबण्डामा काँग्रेससँग ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ !
मधेस प्रदेश : मन्त्रीकै स्वार्थमा ‘असारे विकास’ भएको प्रतिपक्षको आरोप, संसदीय छानबिन माग
कर्णालीमा विपद्का घटना : ११ महिनामा ३०५ जनाले गुमाए ज्यान !
एमालेका प्रमुख सचेतकबाट सभामुखसमक्ष रुलिङको माग
मन्त्री हेरफेरको साइड इफेक्ट : पार्टी छाड्ने मुडमा रेणु
उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका पुगेका सम्भव थपलिया, जो व्यापारमा चम्किए
राष्ट्रियसभा बैठक : रासायनिक मल अभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा सुरक्षाकर्मीद्वारा आत्महत्या